Archive du 20180820
Kandida Ravalomanana “Hiara-kanarina ny nopotehina isika”
Misinda ny ahiahin’ny mpanohana manerana ny Nosy satria tafapetraka teny amin’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny sabotsy 18 aogositra 2018 teo ny taratasy filatsahan-kofidiana ho filoham-pirenena an’i Marc Ravalomanana.
Erick Guanomad Manao pi-maso amin’ny vehivavy Malagasy
Nametraka ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiany ho filoham-pirenena teny amin’ny HCC omaly alahady 19 aogositra tamin’ny 11 ora antoandro ny filoha mpanorina ny orinasa guanomad Erick Rajaonary na Erick GUANOMAD.
Eliana Bezaza “Kandida hanandratra ny maha Malagasy aho !”
Fihetsiketsehana hafa kely no nidiran’ny kandida Eliana Bezaza izay atolotry ny antoko PSD tetsy amin’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana Ambohidahy nanatitra ny dosie maha kandida ho filoham-pirenena azy ny sabotsy teo.
Imbeh Serge Jovial “Tonga ny Gisa Mainty”
Kandida ho filoham-pirenena Malagasy hifaninana amin’ny 7 novambra 2018 i Imbeh Serge Jovial “Economiste Financier” izay nandrotsaka ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana teny amin’ny Hcc Ambohidahy ny sabotsy harivan’ny 18 aogositra lasa teo.
Roland Ratsiraka Miezaka mafy maka ny fon’Antananarivo
Namory vahoaka tetsy amin’ny Coliseum Antsonjombe i Roland Ratsiraka omaly ka nilazany fa hirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena ny tenany noho ny fangatahan’ny ben’ny tanàna maro.
Vondrona Eoropeana Mitaky fifidianana mangarahara
Nisy ny dinidinika sy ny fifanakalozan-kevitra natao niaraka tamin’ny delegasion’ny vondrona eoropeana sy ny mpanao gazety ary ireo tompon’andraikitra amin’ny serasera eo anivon’ny ministera izay natao tetsy amin’ny hotely Tamboho Ambodivona tamin’ny zoma farany teo.
Dr Jules Etienne Hiady amin'ny fampanambadiana ny zaza tsy ampy taona
Simba tanteraka ny hasin'ny vehivavy Malagasy hoy ny dokotera Jules Etienne anisan'ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay hotanterahina ny 07 novambra ho avy izao.
T-Shirt sy Polo propagandy 5000 Ar ka hatramin’ny10.000 Ar ny singany
Iray volana mahery eo ho eo sisa no fotoana hahafahan’ireo kandida hilatsaka hofidiana amin’ny fifidianana Filoham-pirenena mikarakara ny ho enti-manana amin’izany.
Dadafara Ho kandida indray
Tany Bateravola, Fianarantsoa, tany niaviany ny sabotsy teo no nampiezinezenan’i Joseph Martin Randriarimampionona na dadafara, izay filoha mpanorina ny antoko RTM na “refondation totale de Madagascar”,
Vehivavy TIM ao Mahavatse-I Toliara Vonona hanohana ny filatsahan’ny Prezida Marc Ravalomanana
Manambara ny fahavononany hanohana ny filatsahan’i Prezida Marc Ravalomanana hofidiana ho filoham-pirenena amin’ny 7 novambra izao ny Fikambanam-behivavy TIM sy ny renim-pianakaviana ao amin’ny Boriborintanin’i Mahavatse-I Toliara.
Paositra Malagasy Nanokatra ny taom-pilalaovana 2018
Nosokafana ofisialy teny amin’ny kianja Akamasoa Ambohimahitsy tamin’ny sabotsy 18 aogositra 2018 ny taom-pilalaovana 2018 ho an’ny sehatra fanatanjahantena eo anivon’ny Paoma « Paositra Malagasy » Antananarivo.
Tranon’ny fiadiadian’ny faritra Alaotra Mangoro Misy resaka tsy mazava ny fitantanana azy…
Samy gaga ireo rehetra nandalo teo amin’ny biraon’ny faritra Alaotra-Mangoro raha nahita olona niasa manamboatra ilay trano vao notokanana tsy ela akory izay.
Hotsarain’ny vahoaka amin’izay !
Fifidianana izao no malaza ary efa maro ireo kandida nandrotsaka ny dosieny ankoatra ireo hanatitra farany anio sy rahampitso.
Fanadinana CEPE teny Atsimondrano Tafakatra 80,23 % ny salam-pahafahana
Tsy niandry ela fa nivoaka ny sabotsy teo ihany koa ny voka-panadinana CEPE ho an’ny fari-piadidiam-pampianarana Atsimondrano. Tafakatra 80,23 % ny vokatra raha araka ny fanadihadiana natao raha 56,68 % tamin’ny taon-dasa.
Vovonan’ny tanora Malagasy Hitondra ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana
Nampahafantarina tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo ny fijoroan’ny plateforme MG ikambanan’ny ireo tanora sy fikambanana maro samihafa mivondrona ho amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara.
Hifarana rahampitso ny fe-potoana ahafahan’ireo mitetika ho kandida ho filoham-pirenena mametraka ny dosie maha kandida azy ireo.
RANGAHY HITA FATY
Rangahy iray tokony ho 70 taona eo ho eo no hita natsingevan'ny omaly maraina teny Anosivavaka Ambohimanarina. Tsy misy olona mahafantatra azy ety amin'ny manodidina ary tsy fantatra fianakaviana.
Tahirim-bola iraisam-pirenena Kolikolin’ny tetezamita no namotika ny toekaren’i Madagasikara
80 miliara dolara na 265 264 000 000 000 Ariary (1dolara=3315,80 Ariary) no vola very isan-taona aty Afrika noho ny kolikoly.